Fahazoana loharano - Ny fitadiavana loharanom-pampandrosoana CMS hafa dia mety ho fanamby lehibe, saingy miaraka amin'ny WordPress dia hatraiza hatraiza. Fampitandremana: Mety ho olana ihany koa izany… misy maro ny mpamorona sy masoivoho izay mamorona vahaolana tena mahantra ao amin'ny WordPress.
Optimization - WordPress dia tsara ivelan'ny boaty raha ny amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana, saingy tsy dia tsara. Vao tsy ela akory izay dia nanisy sitemap ho azy ireo izy ireo Jetpack plugin, saingy tsy dia matanjaka toa an'i Plugins SEO an'ny Yoast.
Internationalization (I18N) - WordPress antontan-taratasy ny fomba fampiroboroboana ny lohahevitrao sy ny plugins anao, saingy tsy manana ny fahaizana mampiditra ny atiny voafantina amin'ny rafitra. Nampihatra izahay WPML noho izany ary nahita fahombiazana.
Security - Rehefa mampiasa 25% -n'ny tranonkala ianao dia lasibatra goavambe amin'ny hacking. Averina indray, ny sasany amin'ireo fampiantranoana tantanana dia manolotra plugin vaovao sy fanavaozana ny lohahevitra rehefa mipoitra ny olana ara-piarovana. Manoro hevitra mafy ny fananganana lohahevitra ho an'ny ankizy aho mba hahafahanao manohy manavao ny lohahevitra ray aman-dreny tohananao mba tsy hampidi-doza ny tranokalanao amin'ny lohahevitra izay tsy azo havaozina.